Kupererwa nekuchengetera? Edza aya matipi kusunungura nzvimbo pa Windows 10 - WebSetNet
rakanyorwa Martin6 in Uncategorized
Source: Windows nechepakati
Kunyangwe hazvo mazuva ano madhiraivhi akaoma achiuya mune dzakawanda terabyte sarudzo, hazvitore nguva yakawanda kudzamara tavazadza nematoni emafaira, mifananidzo, mavhidhiyo, maapplication, uye mitambo. Usati wazviziva iwe, unotanga kuona kunonoka kuita uye matambudziko kuisa shanduro nyowani dze Windows 10.
Kana yako kifaa ichiderera pasi, Windows 10 inosanganisira akati wandei maficha uye sarudzo dzekuchenesa zvisina basa uye zvenguva pfupi mafaera pamwe nemaapps nemitambo kukwidziridza iyo yekuchengetedza. Kushandisa maturusi aya hakungobatsire kusunungura nzvimbo yekuchengetera mafaera akakosha, asi ichavandudza mashandiro uye nekudzora mikana yematambudziko paunenge uchiisa zvigadziriso.
Muizvi Windows 10 tungamirira, isu tinokufamba iwe kuburikidza nemazano akatiwandei ekuti usunungure nzvimbo yekuchengetera pane komputa yako kuti uwane nzvimbo yekuchengetedza mamwe mafaera uye nekuisa ekuvandudzwa kwenzvimbo pasina nyaya.
1. sununguka nzvimbo ichirasira Recycle Bin
Kunyangwe zvingave zviri pachena, kana iwe ukadzima akawanda mafaera, iwo haana kubviswa ipapo kubva kune rakaomarara dhiraivha. Panzvimbo iyoyo, ivo vanotumirwa kuRecycle Bin kuitira kana iwe uchizoda kudzosa ivo. Nekudaro, nekufamba kwenguva, iyo bin inogona kukura muhukuru, ichipambadza nzvimbo yakawanda, zvinoreva kuti kubvisa mafaera haachadiwe kunofanirwa kuve pakati pezvinhu zvekutanga zvaunofanira kuita kudzoreredza zvimwe zvekuchengetedza kumashure.
Kudurura iyo Recycle Bin pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Tsvaga Recycle Bin uye tinya mhedzisiro yepamusoro kuvhura chiitiko.
Baya Dzokororazve Bin Zvishandiso Tab.
Baya Empty Recycle Bin bhatani.
Baya Ehe bhatani.
Paunenge iwe wapedza nhanho, zvinoenderana nezvakabviswa zvemukati, iwe unogona kukwanisa kusunungura kumusoro kusvika gumi muzana yekutyaira kugona (uchifungidzira iyo Recycle Bin iri kugona).
2. Sunungura kumusoro nzvimbo kubvisa junk mafaera uchishandisa Chengetedzo pfungwa
On Windows 10, Kuchengetedza pfungwa inopa nzira iri nyore yekudzima junk mafaera kubva kune system dhiraivha pamwe neyechipiri neyekunze anotyaira Uchishandisa chiitiko ichi, unogona kukurumidza kubvisa mafaira ekumisikidza apfuura mushure mekuvandudza uye mafaera enguva pfupi kuti usunungure nzvimbo yekuchengetera mafaera akakosha uye nekuvandudza kugona kwemotokari.
Kubvisa junk mafaira uchishandisa Kuchengetedza pfungwa
Kuti usunungure nzvimbo uchishandisa Kuchengetedza pfungwa, shandisa matanho aya:
Click on maitiro.
Click on chengetedzo.
Pasi pechikamu "Chekuchengetedza", tinya iyo Gadzira Kuchengeta Sense kana kumhanya izvozvi kuita.
Pasi pechikamu che "Mafaira Emagetsi", tarisa iyo Bvisa mafaera enguva pfupi ayo maapplication asiri kushandisa kuita.
Shandisa Recycle Bin donhwe-pasi menyu kutsanangura maitiro ekujekesa akadzimwa mafaera.
Shandisa Downloads donhwe-pasi menyu kutsanangura maitiro ekuchenesa mafaera awakatora pasi kubva pa internet.
Kurumidza tambo: Kana iwe uchida kudzima iyo yakawanda kwazvo mafaera, shandisa iyo 1 zuva sarudzo mumenyu inodonha. Zvakare, iyo Downloads dhairekitori rinogona kunge riine mafaera akakosha, zvinoreva kuti zvinokurudzirwa kuita manyorerwo mafaera akakosha usati wamhanya Kuchengeta pfungwa.
Pasi pechikamu che "Rinowanika gore zvemukati" chikamu, shandisa iyo yekudonha-pasi menyu kutsanangura kuti yakareba sei OneDrive zvemukati zvakawiriraniswa kune yako kifaa zvinove online-chete.
Nhamba yakakurumidza: Iyi sarudzo chikamu cheOneDrive Files On-Demand, chinova chinhu chinokutendera kuti uwane magwaro ako, mapikicha, mavhidhiyo, uye mamwe mafaera uchishandisa File Explorer, asi pasina kukosha kwekuzvibatanidza kune yako kifaa kudzikisira kushandiswa kwekuchengetedza. Kana PC yako yave kushomeka pane nzvimbo, unogona kushandisa iyi sarudzo kuita mafaera kungowanikwa chete mugore uye kurodha pasi chete kana iwe uchivada neinternet kubatana.
Pasi pechikamu che "Mahara kumusoro izvozvi", tarisa iyo Delete yapfuura shanduro dze Windows sarudzo. (Kana iyi sarudzo iripo, unogona kusunungura chero kupi kubva pa10GB kusvika pa20GB yenzvimbo.)
Baya Chenesa izvozvi bhatani.
Mushure mekupedza nhanho, Kuchengeta pfungwa kunomhanya uye kudzima zvisina basa mafaera kubva kuchinhu kuti udzore imwe nzvimbo.
Inogonesa Kuchengetedza pfungwa
Kunyangwe iwe uchikwanisa kushandisa Kuchengetedza pfungwa nemaoko, iwe unofanirwa kugonesa chimiro kumhanyisa yekuchengetedza yekuchengetedza otomatiki kudzivirira kupererwa nenzvimbo nekukurumidza.
Kugadzira Kuchengeta pfungwa kuti umhanye otomatiki, shandisa matanho aya:
Tora iyo Kuchengetedza pfungwa toggle switch.
Shandisa iyo Run Kuchengetedza pfungwa yekudonhedza-pasi menyu uye sarudza kana chimiro chichifanira kumhanya otomatiki:
Vhiki rimwe nerimwe.
Mwedzi wega wega.
Munguva yepasi yemahara disk nzvimbo (yakakurudzirwa).
Paunenge iwe wapedza iwo matanho, Kuchengetedza pfungwa kunozo mhanya otomatiki pane iyo hurongwa iwe yawatsanangura.
Kubvisa mafaera enguva pfupi neKuchengetedza pfungwa
Uchishandisa Kuchengetedza pfungwa, iwe unogona zvakare kudzima zvenguva pfupi system uye mafaera eapps (sekushandisa Disk Kuchenesa turu) kudzoreredza akati wandei magigabytes enzvimbo.
Kudzima mafaera enguva pfupi neiyo App yezvirongwa, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu "Local Disk (C :)", tinya iyo MaFaira enguva pfupi item.
Tarisa zvese zvirimo zvaunoda kujekesa kuti usunungure nzvimbo, kusanganisira:
Kuendesa Optimization Mafaira.
MaFaira enguva pfupi.
tembarari Windows kuisa mafaera.
Sisitimu yakagadzirwa Windows Kukanganisa Kumhan'ara Mafaira.
Yenguva Diki Internet Mafaira.
pashure Windows kuisirwa (s).
Kurumidza tambo: Zvinhu zviripo zvinogona kusiyana mukuisa kwako. Zvakare, kana iwe uchida kusarudza iyo Downloads chinhu, usati wabvisa mafaera aya, ita shuwa kuti unzwisise kuti iyi sarudzo inobvisa zvese zvakachengetwa mufaira rako re "Downloads".
Baya Bvisa mafaera bhatani.
Mushure mekupedza nhanho, chimiro chinodzima mafaera echinguvana awakasarudza, kusunungura nzvimbo yemamwe mafaira akakosha.
3. Sunungura nzvimbo yekubvisa ma temp mafaira uchishandisa Disk Kuchenesa
Kunyangwe Kuchengetedza pfungwa chiri chiitiko chinotsiva Disk Kuchenesa, iwe unogona kushandisa chishandiso chenhaka kusunungura nzvimbo pakombuta yako, laptop, kana piritsi.
Kubvisa mafaera enguva pfupi neDisk Kuchenesa
Kudzima mafaera enguva pfupi uchishandisa Disk Kuchenesa pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Tsvaga Disk Cleanup uye sarudza mhedzisiro yepamusoro kuvhura chiitiko.
Shandisa iyo "Drives" yekudonhedza menyu uye sarudza iyo (C :) kutyaira.
Baya OK bhatani.
Baya Kuchenesa system mafaira bhatani.
Windows simudzira marogi mafaira.
Dhaunirodha Chirongwa Mafaira.
Dhirairi mutyairi mapakeji.
Mutauro Resource Mafaira.
Baya Delete maFaira bhatani.
Paunenge wapedza matanho, akafanana neSecurity Sense, mafaera echinguvana achabviswa kubva pakombuta yako, ichisunungura nzvimbo pane hard drive.
Delete System Kudzorera uye Shadow Kopi uchishandisa Disk Kuchenesa
Muchiitiko chauri kushandisa Shanduro Dzorera, uye Shadow Makopi (vhoriyamu snapshot iyo inobvumidza kusevha mafaera kunyangwe paakavhurika), unogona zvakare kudzima mafaera ekare kutora zvakare yekuwedzera kuchengetedza.
Kuti ubvise zvese kunze kwekupedzisira kudzoreredza mapoinzi, shandisa matanho aya:
Baya Zvimwe Zvimwe Tab.
Pasi pechikamu "Dzosera Kudzorera uye Mumvuri Makopi", tinya iyo Tsvaira bhatani.
Baya Kudzima bhatani.
Mushure mekupedza matanho, iwe unozotora imwezve nzvimbo yekuchengetera mamwe mafaera.
4. sununguka nzvimbo kugadzira OneDrive mafaera aripo pane-kudiwa
Ipo iwe uchikwanisa kushandisa Kuchengetedza pfungwa kugadzira zvisina kushandiswa OneDrive zvemukati zvinowanikwa chete online, kana iwe uchida kusunungura nzvimbo nekukasira (uye yega megabyte kuverenga), iwe unogona kuita chero mafaera aripo pane-kudiwa nemawoko.
Kugonesa OneDrive Mafaera Pa-Kudiwa
OneDrive Mafaira Pa-Kudiwa inofanirwa kuve inogoneswa nekutadza, asi hazvisi, unogona kushandisa matanho aya:
Baya OneDrive icon muzasi-kurudyi kona yebasa rebasa.
Baya More kuita.
Baya Settings kuita.
Baya Settings Tab.
Pasi pechikamu che "File On-Demand", tarisa iyo Sevha nzvimbo uye dhawunirodha mafaera sezvaunoshandisa kuita.
Ukangopedza iwo matanho, iwe unogona kutanga kushandisa Files On-Demand kufambisa mafaera kune OneDrive dhairekitori uye woita kuti iwanikwe chete online kuti isunungure nzvimbo.
Kuita zvemukati zvemukati zviwanikwe online
Kugadzira mafaera emuno kuwanikwa pane zvaunoda, shandisa matanho aya:
Open Faira Explorer.
Sarudza iyo OneDrive dhairekitori kubva pane yekuruboshwe pane.
Sarudza mafaera nefaira kutora nzvimbo.
Dzvanya-kurudyi kusarudza uye sarudza iyo Mahara kumusoro nzvimbo kuita.
Pamusoro pekuita kuti mafaera akawiriraniswa awanikwe chete neinternet yekubatanidza, unogona kusunungura imwezve nzvimbo nekufambisa mamwe mafaera nemafolda kune iyo OneDrive dhairekitori, uye shandisa matanho ari pamusoro apa kuchengetedza nzvimbo yekutyaira.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unozokwanisa kuwana zvako zvese zvemukati uchishandisa File Explorer, asi iwe unongokwanisa chete kuvhura iwo neinternet kubatana.
Iyo yemahara vhezheni yeOneDrive inongobvumidza iwe kuti uchengetedze kusvika ku5GB akakosha mafaera, asi iwe unogona kugara uchiwana kunyorera kukwidza muganho kuenda ku1000GB.
5. sununguka nzvimbo uchisunungura asiri-akakosha maapplication nemitambo
Kubvisa maapplication ausingade ndeimwe nzira yekudzosera imwe nzvimbo pane yako kifaa. Zvakare, mitambo inogona zvakare kudya yakawanda yekuchengetera nekukurumidza, zvinoreva kuti kuchengeta mitambo kune yakaderera nhamba kunogona kudzikisira kushandiswa kwekuchengetedza, uye ichave ichivandudza mashandiro emitambo.
Kuti ubudise maapplication nemitambo, shandisa matanho aya:
Click on Zvirongwa & maficha.
Shandisa iyo "Ronga ne" sefa uye sarudza iyo zera tarisa kuti uone nekukurumidza maapplication nemitambo uchishandisa yakawanda nzvimbo.
Sarudza iyo app kana mutambo waunoda kubvisa.
Baya Uninstall bhatani.
Baya Uninstall bhatani zvakare.
Enderera pamwe ne-e-screen mirayiridzo (kana zvichibvira).
Paunenge wapedza nhanho, dzokorora iwo iwo iwo mairairo kuti ubvise mamwe maapplication nemitambo kubva kune yako kifaa.
Kubvisa mitauro isina kushandiswa
Kubvisa mitauro yechipiri yausingashandise kunogona kubatsira kudzikisa mashandisiro ekuchengetedza:
Click on Nguva & Mutauro.
Click on mutauro.
Sarudza mutauro wausingachashandisi.
Baya Bvisa bhatani.
Mushure mekupedza nhanho, ungangoda kudzokorora iwo mirairo kudzima mimwe mitauro yausingashandise.
Iwe unogona zvakare kusunungura imwe yekuwedzera nzvimbo nekubvisa kunze kwemamepu mepu:
Click on offline NO mepu.
Baya Delete mamapu ese bhatani.
Baya Dzinga zvose bhatani.
Paunenge iwe wapedza nhanho, mamamepu akambochengetedzwa pane chako kifaa anozobviswa kusunungura nzvimbo.
Kubvisa zvaunogona kuita
Kana chishandiso chako chiine sarudzo dzekuisa dzakaiswa (senge Windows Media Player, Windows Mhoro Chiso, Internet Explorer 11, nezvimwewo) zvausingashandise, unogona kuzvibvisa kuti uwane imwe nzvimbo yekuwedzera.
Kuti ubvise zvakasarudzika maficha pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu "Zvirongwa & maficha", tinya iyo Zvimwe zviitiko kuita.
Sarudza iyo ficha uye tinya iyo Uninstall bhatani.
Mushure mekupedza matanho, ungangoda kudzokorora iwo mirairo kuti ubvise zvimwe zvekuwedzera maficha.
6. Sunungura nzvimbo inofambisa mafaera, maapplication, mitambo kune yekunze dhiraivha
Kana iwe uchiri kushomeka yakaderera pane yekuchengetedza, iwe unofanirwa kumisikidza yekunze dhiraivha yekufambisa uye chengetera ako azvino uye ramangwana mafaera. Zvakare, iwe unogona kunyange kumisikidza Windows 10 kuchengetedza mafaera munzvimbo nyowani otomatiki kune data remangwana.
Kufambisa mafaera emunharaunda kune nyowani dhiraivha
Kuendesa mafaera aripo kune imwe nyowani, batanidza yekunze dhiraivha kune yako kifaa, uye shandisa matanho aya:
Tsvaga kune iyo folda ine zvemukati zvaunoda kufambisa.
Baya musha Tab.
Baya Enda kune bhatani.
Sarudza iyo Sarudza nzvimbo kuita.
Sarudza nzvimbo itsva yaunoda kuenda.
Baya Enda bhatani.
Mushure mekupedza nhanho, ungangoda kudzokorora iwo mirairo yekufambisa mamwe mafaera uye maforodha kunzvimbo nyowani sezvazvinodiwa kudzikisa kushandiswa kwekuchengetedza mumotokari irikusiya nzvimbo.
Kuchengetedza mafaira emangwana kumotokari itsva pakarepo
Kugadzirisa Windows 10 kuchengetedza mafaera, uye nekuisa maapplication panzvimbo nyowani otomatiki, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu "Zvimwe zvekuchengetedza" chikamu, tinya iyo Shandura apo zvinyorwa zvitsva zvakachengetedzwa kuita.
Shandisa menyu ekudonhedza pasi, sarudza iyo nyowani nzvimbo yekutyaira kuti uchengetedze mafaera otomatiki kune yega yega mhando mhando.
Baya Shandisa bhatani.
Ukangopedza iwo matanho, mafaera matsva uye maapplication aunotora kubva kuMicrosoft Store anozochengetedza munzvimbo nyowani nekutadza.
Kufambisa maapplication nemitambo kune nyowani dhiraivha
Windows 10 inokubvumira kufambisa akawanda maMicrosoft Store maapps nemitambo yatove yakaiswa pane chako chishandiso kune yekunze chengetedzo pasina kudzoreredza, izvo zvinogona kubatsira kudzikisira kuchengetedza kwekushandisa pane mota
Kutamisa maapplication nemitambo kune imwe nzvimbo, batanidza drive nyowani, uye shandisa matanho aya:
Sarudza iyo app kana mutambo waunoda kutama.
Shandisa iyo yekudonhedza menyu kuti usarudze nzvimbo.
Baya Enda bhatani zvakare.
Mushure mekupedza nhanho, ungangoda kudzokorora iwo iwo iwo mairairo kuraira ekuwedzera mamwe maapplication kana mitambo kunzvimbo nyowani.
Paunenge uchishandisa chinhu ichi, unofanirwa kuchengetedza rekunze dhiraivha rinogara rakabatana nekombuta yako. Zvikasadaro, iwe haugone kuvhura maapplication kana kutamba iwo magemhu awakatamisa kunzvimbo nyowani.
7. sununguka nzvimbo inoremadza Hibernation pa Windows 10
On Windows 10, Hibernation chinhu chechipiri chinochengetedza iyo data mundangariro pane hard drive inobvumira kuvhara komputa inochengetedza iyo yazvino musangano. Kana chishandiso chadzoka online, unogona kutora kwawabva chete.
Kunyangwe chiri chinhu chakakura, chingangoda magigabytes mazhinji epasi kuchengetedza ruzivo rwakatakurwa mundangariro mukati me musipolis.sys ikwidzwe.
Kana iwe uchiderera pasi pane nzvimbo, unogona kudzima Hibernation kuti uwane nzvimbo yemamwe mafaira akaomarara uchishandisa matanho aya:
Nyora unotevera kuraira kudzima Hibernation uye pinda pinda:
Paunenge iwe wapedza nhanho, hauchakwanise kunamatira mudziyo wako, asi iyo iripo yekuchengetedza ichawedzera kuchengetedza mamwe mafaera.
Mune ramangwana, unogona kudzosera shanduko uchishandisa iwo iwo mirairo, asi pa nhanho Nha. 3, ita shuwa kushandisa iyo powercfg /hibernate on command.
8. sununguka nzvimbo uchishandisa NTFS compression
Pamusoro pezvose zvataurwa pamusoro, iwe unogona kushandisa isingaremi compression ficha yakavakirwa muNTFS kudzikisira kushandiswa kwekuchengetedza uchichengetedza yakajairwa kuwana kune ako mafaera. Uchishandisa iyo NTFS ficha, unogona kumanikidza mafaera, maforodha, kana iyo yakazara drive.
Zvichikosha: Kushandisa kumanikidza kunogona kukanganisa mashandiro ehurongwa sezvo sisitimu inoda kumanikidza uye kudzikamisa mafaera pane nhunzi uchishandisa maitiro anoda zviwanikwa zvekuwedzera. Iwe unofanirwa kushandisa iyi sarudzo chete kana zvichidikanwa kana kana iwe uine inokwanisa kwazvo system.
Kugadzira folda yekumanikidza
Kugonesa kudzvanywa kweNTFS mufaira, shandisa matanho aya:
Bhurawuza kune iro folda ine zvemukati izvo iwe zvaunoda kumanikidza.
Tinya-kurudyi folda uye sarudza iyo Properties kuita.
Baya enderera bhatani.
tarisa Dzvanya zvinhu zviri mukati kuti uchengetedze disk nzvimbo kuita.
Sarudza iyo Nyorera shanduko kune ino folda, maforodha uye mafaera kuita.
Baya OK bhatani zvakare.
Mushure mekupedza nhanho, iyo faira yekumanikidza inozoita kuti igone mufaira, ichideredza saizi yemafaira aripo uye emangwana aunochengetedza munzvimbo ino. (Matanho ari pamusoro anotarisa pane maforodha, asi iwo iwo iwo mairairo anoshanda kutsikisa mafaera rimwe nerimwe.)
Kana iwe usisiri kuda kumanikidza, unogona kugadzirisa shanduko uchishandisa iwo iwo mirairo, asi pa nhanho Nha. 5, ita chokwadi chekubvisa iyo Dzvanya zvinhu zviri mukati kuti uchengetedze disk nzvimbo kuita.
Kugadzirisa kumanikidza kwekutyaira
Kugonesa kudzvanywa kweNTFS mumotokari, shandisa matanho aya:
Click on This PC kubva kuruboshwe.
Pasi pechikamu che "Midziyo nemadhiraivha", tinya-kurudyi dhiraivha iwe yaunoda kumanikidza uye sarudza iyo Properties kuita.
tarisa Dzvanya dhiraivha iyi kuti uchengetedze disk nzvimbo kuita.
Kurumidza tambo: Kazhinji, iwe unongoda chete kushandisa iyi sarudzo pane yechipiri dhiraivha kana chikamu, sekumanikidza iyo Windows 10 kuiswa dhiraivha kunogona kukanganisa mashandiro.
Sarudza iyo Nyorera shanduko kutyaira (tsamba yekutyaira), maforodha madiki, uye mafaera kuita.
Ukangopedza iwo matanho, NTFS inozodzvanya dhiraivha uye chero zvemukati zvakachengetwa pairi.
Kana ficha yacho isisiri kudikanwa, unogona kushandisa iwo iwo iwo mairairo kuraira shanduko, asi pa nhanho Nha. 4, ita chokwadi chekubvisa iyo Dzvanya dhiraivha iyi kuti uchengetedze disk nzvimbo kuita.
9. Sununguka kumusoro nzvimbo compressing yekumisikidza tsoka yeku Windows 10
Windows 10 inouyawo neCompact OS, chishandiso chakagadzirirwa kumanikidza uye kudzikisira tsoka yekumisikidza uye maapplication.
Kazhinji, chinhu chinochengeterwa zvishandiso zvine mashoma kuchengetedza. Zvakadaro, iri sarudzo inogona kuuya inobatsira kana iwe uchida yekuwedzera imwe nzvimbo nekukasira, uye iwe hauna yekunze yekuchengetera sarudzo.
Kuderedza saizi yeiyo Windows 10 kumisikidza uye maapplication, shandisa matanho aya:
yambiro: Ichi chiyeuchidzo cheushamwari chekuti kuchinjisa mafaera sisitimu kune njodzi, uye kunogona kukonzera kukuvara kusingachinjiki kune yako yekuisa kana usinga zviite nemazvo. Zvinokurudzirwa kuita zvenguva pfupi backup yakazara yePC yako vasati vaenderera mberi.
Tora iyi inotevera kuraira kumisikidza kuiswa kwe Windows 10 padhuze nemaapps uye pinda pinda:
Mushure mekupedza nhanho, maitiro anozotora zvakapoteredzwa 2GB yekuchengetedza isina kukanganisa mashandiro zvakanyanya.
Kana ficha yacho isisiri kudiwa, unogona kugara uchidzorera shanduko uchishandisa iwo iwo mirairo, asi pa nhanho Nha. 3, ita shuwa kushandisa iyo compact.exe /compactOS:never command.
10. Sunungura nzvimbo yekudzima vashandisi haichagovana mudziyo
Iwe unogona zvakare kusunungura nzvimbo nekubvisa maakaundi kubva kune vashandisi vasisiri kushandisa komputa.
Kuchenesa mushandisi maakaunzi pa Windows 10, shandisa matanho aya:
Click on Mhuri & vamwe vashandisi.
Sarudza iyo account yaunoda kubvisa kuti usunungure nzvimbo.
Baya Delete account uye data bhatani.
Paunenge iwe wapedza iwo matanho, iyo yefaira mushandisi uye data zvinodzimwa kubva kune yako kifaa, kusunungura imwe yekuwedzera nzvimbo. Kana iwe uine maakaundi akawanda asina kushandiswa, dzokorora matanho eakaundi yega yega kuti utorezve yakanyanya chengetedzo.
11. (Bonus) Ona hard drive kushandiswa pa Windows 10
Paunenge uchinge uchitoziva kuti chishandiso chako chiri kudzikira panzvimbo, unogona kunge uchiri kushamisika kuti ndeapi mafaera ari kushandisa iyo yekuchengetera kuziva data raunoda kuchenesa.
Kuti uone kushandiswa kwekuchengetedza pakombuta yako, shandisa matanho aya:
Pasi pechikamu "Local Disk C:", tinya iyo Ratidza zvimwe zvikamu sarudzo.)
Ona mashandisiro ari kushandiswa.
Sarudza chikamu chimwe nechimwe kuti uone zvimwe zvakawanda nezviito zvaunogona kutora kusunungura nzvimbo.
Mushure mekupedza nhanho, iwe unenge uine nzwisiso iri nani yekushandisa kwekushandisa pane yako kifaa nenzvimbo dzekutarisisa kusunungura nzvimbo.
Semuenzaniso, kudzvanya iyo Sisitimu & yakachengetedzwa chikamu, iwe unozogona kuwona kuti yakawanda sei nzvimbo kuiswa kwe Windows 10 iri kutora, pamwe nekuwanda kwenzvimbo yekurangarira memory, hibernation mafaera, system kudzoreredza, uye huwandu hwekuchengetedza iyo system irikuchengeterwa yekuvandudzwa (kana zvichibvira) vari kutora pane yemuno dhiraivha.
Uchishandisa limited network network? Heano maitiro ekudzora mashandisiro pane Windows 10
Yakanakisisa kuchengetedza kwegore kwe2020 online: yemahara, yakabhadharwa uye bhizinesi sarudzo
link ku343 Kuderedza Halo Infinite's Cosmetic Mitengo Kutanga Svondo rino
343 Kuderedza Halo Isingaperi's Cosmetic Mitengo Kutanga Svondo rino
Nepo Halo Infinite yakanyatsoputika pachiitiko seimwe yemitambo inonakidza yakavhurika yepasi rose ya2021, uye yakamaka kudzoka kufomu yeiyi nhevedzano, haisati yatangisa pasina chikamu chayo chakanaka che ...
chinongedzo kuGamba Rangu Academia Ultra Rumble Yakaziviswa yePS4, Xbox One, Nintendo Chinja, & PC
Gamba Rangu Academia Ultra Rumble Yakaziviswa yePS4, Xbox One, Nintendo Chinja, & PC
Bandai Namco Varaidzo ichangobva kuzivisa Gamba Rangu Academia Ultra Rumble, mutambo wevhidhiyo mutsva weGamba Rangu Academia. Ichasunungura PS4, Xbox One, Nintendo Switch, uye PC, asi zuva chairo kana...